ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ 2022 Honda Odyssey အမျိုးအစား! – MyMedia Myanmar
ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ 2022 Honda Odyssey အမျိုးအစား!
2022 Honda Odyssey အမျိုးအစား ကတော့ အခုဆိုရင် Dealership တွေထံမှာ ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ အဆင့်ကို ရောက် ရှိနေပါပြီ။ ဟုတ်ပါတယ် တကယ်လို့ သင်ဟာ အချိန်ခရီးသွား တစ်ယောက်လည်း မဟုတ်တာ သေချာရင် အခု ၂၀၂၁ ရဲ့ ပထမလ အစပဲ ရှိသေးတယ် ဆိုတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Honda ကုမ္ပဏီ ကတော့အခု Odyssey ကား အသစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာ အကြောင်းပြချက်တို့နဲ့ အတူအခုလိုပဲ လျှင်လျှင်မြန်မြန် ထုတ်လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင် လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Honda ရဲ့ အခြားသော Lineup အမျိုးအစားတွေ အကုန်လုံး က 2021 အတွက်ပဲ ရှိနေ သေးတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ Odyssey ကတော့ မော်ဒယ်နှစ် ကို တစ်နှစ် ကျော်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒီ အတွက် လည်း အကြောင်းပြချက်တစ်ရပ် ထူးထူးခြားခြား ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဈေးကွက်အတွင်းမှာ လုံခြုံစိတ်ချရမှု အမြင့်မားဆုံး Minivan တစ်စီးဖြစ်တဲ့ 2021 Honda Odyssey ဟာ ဆိုရင် မကြာသေးမီကပဲ တော်တော် လေးထူးခြား ကောင်းမွန်တဲ့ Honda Vac ဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုနဲ့လည်း မိတ်ဆက် ပေး ထားခဲ့ ပါတယ်။ Honda Vac ဆိုတာ ကတော့ ShopVac အသေးစားလေး တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကလေးတွေ ၊ ဒါမှမဟုတ် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေကြောင့် ရှုပ်ပွသွားခဲ့တာတွေကို ကောင်း‌ကောင်း ရှင်းပေးနိုင်မယ့် သန့်ရှင်းရေးစက် တစ်မျိုးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခု ဝန်ဆောင်မှုကို Supplier Issue တစ်ချို့ ကြောင့် အဆိုပါ ကားမှာ မထည့်သွင်း ပေးနိုင်ခဲ့တာ ကြောင့် မို့လို့ 2022 Model အဖြစ် တစ်နှစ် ကျော်ပြီး ထုတ်လုပ် ရဖို့ရှိလာခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခုကမ္ဘာနဲ့ အဝန်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရောဂါကပ် ဘေးကြီးကလည်း ကားလုပ်ငန်းကို အတော်လေး ထိခိုက်စေခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Honda ရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရ ပုဂ္ဂိုလ်က The Drive ကို အခုလိုအခြေအနေတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောကြားရာမှာတော့ Model Year တွေကို မိတ်ဆက်နေတဲ့ အနေအထားဟာ နှစ်တွေ တစ်နှစ် နဲ့ တစ်နှစ် အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ကွဲပြား ခြားနားမှုတွေ ရှိနေနိုင်ပြီး ကားမော်ဒယ်တွေ အရလည်း ကွဲပြားနိုင်သေးကာ အချို့အကြောင်း ကိစ္စတွေဟာ ထိန်းချုပ် နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လည်း ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အခု Honda Odyssey အမျိုးအစားကိုလည်း ၂၀၂၂ မော်ဒယ် နှစ်အတွက် ကျော်ပြီး ထုတ်လုပ်လိုက် ရခြင်းမှာ 2021 Model Year အတွက် ဖန်တီးနေတဲ့ Odyssey Elite မှာ Supplier ဘက်က ကိစ္စ တစ်ချို့ကြောင့်ပဲ HondaVac Feature မပါဝင်လာတာကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ပြန် လည် ဖြေရှင်းပေးသွားပါတယ်။ အဆိုပါ 2022 Honda Odyssey ကား တွေကိုတော့ နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှာ အခု ဇန်နဝါရီ လ ၁၂ ရက် နေ့ လောက်စလို့ Dealership တွေထံမှာ စတင်ဝယ်ယူ နိုင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၅ ခုမြောက် မျိုးဆက်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အဆိုပါ ကားအသစ်ကတော့ မကြာသေးမီကမှပဲ ဒီဇိုင်းပြန်လည် ဆန်း သစ်ထားတာ ဖြစ်ကာ သူ့ရဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ Features တွေ ထဲမှာ အနောက်ဘက် ထိုင်ခုံတွေ အတွက် Entertainment စနစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးလာတာ ဖြစ်ကာ Built-In ပါဝင်လာမယ့် Streaming App တွေကိုလည်း ရရှိ နိုင်ဦး မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ထိုင်ခုံတွေရဲ့ ဒုတိယတန်းနဲ့ တတိယတန်းတွေကိုကောင်းကောင်း စောင့်ကြည့်ထားနိုင်မယ့် ကင်မရာ တွေ အပြင် Honda ရဲ့ Convenient Magic Slide Seating System ကိုလည်း အခု ကားအသစ်မှာ တပ်ဆင် ပေး ထား ပါသေးတယ်။ 2022 Honda Odyssey အမျိုးအစားကိုတော့ Trim ၅ ခုနဲ့ ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး LX ၊ EX ၊ EX-L ၊ Touring နဲ့ Elite တို့ ဆိုပြီးနာမည် တွေ ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်းမှာလည်း Odyssey ဟာ အစီးရေပေါင်း ၈၃,၄၀၉ အထိ ရောင်းချ ခဲ့ရပြီး HondaVac ရဲ့ ပိုမို အဆင်ပြေစေတဲ့ စနစ်တွေ မပါဝင် လာတော့ပေမယ့်လည်း အခု ၂၀၂၁ မှာလည်း ကောင်းမွန်ဆဲ ရောင်းအားကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။
The post ဈေးကွက်ထဲကို ရောက်နှင့်နေပြီးဖြစ်တဲ့ 2022 Honda Odyssey အမျိုးအစား! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-24T14:01:10+06:30January 24th, 2021|MYCARS MYANMAR|